Shirkada Isgaarsiinta Golis oo Hadiyado u qeybisay Macaamiisheeda Gaalkacyo(Sawiro) – SBC
Shirkada Isgaarsiinta Golis oo Hadiyado u qeybisay Macaamiisheeda Gaalkacyo(Sawiro)
Shirkada Isgaarsiinta ee Golis Telecom Soomaaliya ayaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ka fulisay Adeegyo ay ugu deeqday Bulshada Magaaladaasi Hadiyado, kuwaas oo ahaa kuwo kala duwan.
Shirkada Golis oo iyadu u taagan u adeega Bulsha weynta Soomaaliyeed ayaa halkaasi ugaga sameysay adeegyo ay ka mid yihiin deeq iyo Hadiyado, kuwaas oo kala lahaa noocyo farabadan, sida kuwo Si gaar ah Macaamiisha loogu maamuusay iyo kuwo ay bulshada kaga qeyb qaadanayeen qadadka iyo Adeegyada ay bixiso Shirkada.
Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha lagu bixiyay Hadiyadaha in dadweynuhu ay taleefanadooda gacanta ee golis ay ka soo dirayeen SMS ay ku qorayaan Hadiyad a super Gift taas oo u sahal siineysay in ay ku guuleystaan Hadiyado qaali ah sida in ay helaan, Gaari, Computer,Sad Dahab, Qasalad dharka lagu dhaqdo, Mobile-lo iyo Hadiyado kale oo gaaraya 140 hadiyadood, taas oo ay shirkadu ugu talagashay.
Xarunta Golis Telecom ee magaaladaasi waxaa lagu qabtay Xaflad balaaran oo lagu soo bandhigayay Dadkii ku guuleystay Hadiyadaha ay Shirkadu bixisay,
Xafladaasi waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee Bulshada, Masuuliyiinta Shirkada Golis, waxgaradka iyo Odyaasha, iyo weliba Macaamiisha shirkada,
Waxaa hadalo khiimo badan ka soo kala jeediyay Masuuliyiin ka socotay Shirkada Golis oo ku tilmaamay mid ka faaiideysi mudan Hadiyada Super Gift ee ay Golis ugu deeqday Macaamiisheeda,
Ka dib Waxaa bilaabatay in lakala saaro ku dhowaad 20-kun oo ka mid ah Macaamiisha Shirkada kuwaas oo iska diiwaan geliyay Hadiyada Super Gift.
Waxaa xafladaasi lagu soo bandhigay Sanduuq ay ku jiraan Warqado jar jaran oo ay ku qoranyihiin Nambarada Dadweynaha isu soo diiwaan geliyay Hadiyadaha kuwaas oo markii dambe mid mid loo soo saarayay, si loogu dhawaaqo Qofka helay Hadiyada ay ugu hadiyadeeysay Shirkada.
Hadiyada 1aad ayaa aheyd Mida Gaariga, waxaana Heshay Haweeney ka mid ah Macaamiisha Shirkada Golis ee ku dhaqan Magaaladaasi Gaalkacyo, iyadoo yeelatay Nomberka ugu horeeyay ee laga soo dhexsaaray Sanduuqa, halka hadiyadaha kale ay sidaasi oo kale u heleen macaamiisha.
Si toos ah ayaa ay shirkada Golis u gudoonsiisay Hadiyadahaas dhamaan inta qof ee nasiibkoodu siiyay .
Cumar Ciise Maxamed Faaruuq waa mid ka mid ah saraakisha Shirkada Golis waxaana isagoo halkaasi ka hadlayay uu sheegay in Shirkadu hadiyadaha ceynkan oo kale ah ay horay ugu sameysay Macaamiisheeda ayna u balanqaadeyso in sanadwalba ay u qabato fursadahan oo kale .
Sidoo kale Siciid Xuseen madaxa Suuqgeynta Shirkada Golis ayaa uga mahad celiyay macaamiisha iska so diiwan gelisay adeegan isagoona u hambalyeeyay intii ku guuleysatay oo uu nasiibkoodu siiyay hadiyadahan
Gaba gabadii shirkada golis ayaa Bulshada Macaamiisheeda ah u sameysa fursadahan qaaliga ah sanadwalba waxaana sanadkan ay ka fulisay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug, waxaana hadiyadahan loogu magac daray Super gift.